Fanongotana sarivongana (tsangambato) : Frantsa miatrika ny lasany momba ny fanjanahana sy ny fanandevozany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jona 2020 14:51 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, عربي, Italiano, русский, Ελληνικά, Nederlands, नेपाली, Română , Français
Tsangambaton'i Jeneraly Faidherbe ao Lille, avaratr'i Frantsa. Sary zaraina ao amin'ny Flickr-n'i Fred Romero, ampiasana ny lisansa CC by 2.0
Nandritra ny herinandro maro, raha nahitàna firongàtana vaovao ny fihetsehana manohitra ny fanavakavahana nanerana izao tontolo izao, mizarazara be ny ao Frantsa manoloana ny tokony hatao amin'ireo sary vongana mampiseho ireo endrika manan-tantara nifamatotra tamin'ny fanjanahantany sy ny fanandevozana.
Hetsika erantany fampahatsiarovan-tena momba ny fanavakavahana eny anivon'ny fiarahamonintsika
Namelona indray ny adihevitra momba ny fanavakavahana ara-drafitra manoloana ireo mainty hoditra miaina eny anivon'ny fiarahamonina tandrefana ny fahafatesan'i George Floyd tao Etazonia tamin'ny 25 May lasa teo sy ny fifohazan'ny hetsika “Black Lives Matter” nanerana izao tontolo izao. Tsy afa-bela tamin'io adihevitra io i Frantsa, izay niha-nahazo vàhana nanomboka tamin'ny nahafaty an'i Adama Traoré, Frantsay iray manam-piaviana Maliàna, taorian'ny fisamborana nataon'ny zandary azy tamin'ny 2016. Nanomboka tamin'izany ny fianakaviany no efa nitaky ny marina.
Mitàna ny sehatra tato ho ato ny lafy iray amin'io adihevitra io : ny fanontaniana momba ireo tsangambato maneho ireo olomalazan'ny tantara miteraka resabe. Ao amin'ny seranana anglisy ao Bristol, toerana tena ivon'ny famarotana andevo mainty hoditra tamin'ny taonjato faha-17 sy faha-18, nendahan'ireo mpikatroka avy amin'ny hetsika “Black Lves Matter” tamin'ny 7 Jona 2020 ny tsangambaton'ilay mpivarotra andevo Edward Colston. Tao Belzika, marobe ireo tsangabato naneho ny mpanjaka Léopold II — nandrafitra ny fanjanahana an'i Kôngô ary tomponandraikitra tamin'ireo habibiana niaretan'ny vahoaka Kôngôley teo anelanelan'ny 1885 sy 1908 — no nopotehina nandritra ny volana Jona no sady lohahevitry ny fanangonantsonia iray nitakiana ny fanesorana azy ireny.
Ao Frantsa sy ireo zarataniny any an-dranomasina, betsaka ireo endrika isankarazany toherina
Ao Frantsa, somary tsy dia mbola ifantohan'ny sain'ireo mpampita vaovao loatra aloha io adihevitra io. Nefa dia marobe ireo endrika manana lova no be mpanohitra sy hita ao amin'ity hery mpanjanaka fahiny ity, isan'ireny ny ampira notoherina fatratra teo anelanelan'ny taonjato faha16 sy faha-20 nitatra nanerana ireo tanibe, tonga hatramin'ny habe faratampony 12 tapitrisa km².
Ao Lille, ny tsangambaton'ny Jeneraly Louis Faidherbe, teraka tao amin'io tanàna ao avaratra io, no miteraka olana. Araka ny nambaran'ny fikambanana “Tsy maintsy adaboka i Faidherbe“, io miaramila malaza noho ny zavabitany nandritra ny ady nifanaovan'ny frantsay sy ny prosiàna io tamin'ny 1870 io dia sady “fanalahidin'ny fakàna an'i Senegaly ho zanatany” koa, tomponandraikitry ny fampielezankevitra “fampandriantany” tanaty rà nandriaka tany afovoan'ny taonjato faha-19.
Ao Parisy, lasibatra ihany koa i Jean-Baptiste Colbert, minisitra fony faha-Louis XIV (taonjato faha-17) izay ny sarivongan'ny tapany ambony dia misintirintirina eo anoloan'ny antenimieram-pirenena. Izy io indrindra koa no nanoratra Lalàna mainty ho an'ireo Antilles frantsay, nivoaka tamin'ny 1685 ary namaritra ireo zon'ny tompon'andevo amin'ireo andevony, mampitovy ny andevo amin'ny “olona fànaka” (êtres meubles). Noraràna tsy hatao ao Frantsa ny fanandevozana saingy nampiharina tany amin'ireo zanataniny. Tamin'ny 2017, Louis-George Tin, filohan'ny CRAN (Conseil Représentatif des Associations Noires) dia nanao fanambaràna momba an'i Colbert : “Colbert dia fahavalon'ny fahalalahana, ny fitoviana, ny firahalahiana” [teny fanevan'ny Repoblika Frantsay]. Vao haingana, ilay praiminisitra taloha, Jean Marc Ayrault dia nanao antso ny hanovàna ny anaran'ireo toerana nampitondraina ny anarany.
Endrika iray hafa miteraka resabe : Georges Cuvier, natioralista sy anatômista tany amin'ny fiandohan'ny taonjato faha-19, izay manaingo tanàna marobe ao Frantsa ny tsangambatony. Izy no mpisolo tena ny teoria siantifikan'ny mpanavakavaka tamin'izany fotoana izany, izy no nandray an-tànana ny fandrasarasàna ny fatin'i Saartjie Baartman (nomena anaram-baovao ho Vénus Hottentote) taorian'ny nahafatesany. Voalaza fa ny vondrona “Coordination Action Autonome Noire” no niampanga azy:
“Tsy mpanavakava-bolonkoditra i Frantsa” tsy maintsy olona teraka talohan'ny nisian'ny henatra ianao vao afaka hisaina tahaka izany ary hiteny ao anatina firenena iray izay hita eny rehetra eny ny fanindrahindràna ny fanandevozana: làlana, tsangambato, ary tranobe.
Ny 8 hatramin'ny 30 Jona, ndeha hofongarintsika any amin'ny tsy fahafantarana azy izay mampahazoazo aina azy any ny amin'izy ireny! #EsclavagistesPartoutRéparationsNullePart pic.twitter.com/fjCBIQbuF0
— C.A.A.N Coordination Action Autonome Noire (@ActionNoire) 15 Jona 2020
Any ampitan'ny ranomasiny, any amin'ireo zaratany azon'ny ampira frantsay mpanjanatany ary ankehitriny atambatr'izy ireo amin'ny repoblikany, mbola vao mainka misy lanjany mandrakariva ilay fanontaniana. Any Martinika, tsangambato roa maneho an'i Victor Schoelcher (1804-1893), endrika malazan'ny fanafoanana ny fanandevozana sy nankasitraka ny fanomezana onitra ireo tompon'andevo, no nopotehina tamin'ny 33 May lasa teo. Ao Goiàna, nasian'ireo manampahefana any an-toerana pôlisy hiaro ny tsangambatony:
⚪️ #Guyane : Alina iray teo amin'ny kianja Victor #Schoelcher de Cayenne, toerana misy pôlisy efa nandritra ny 24 ora hiaro ny tsangambato fahatsiarovana ilay nandrava ny fanandevozana, ny mangirandratsin'ny fotoana hankalazan'ny any an-toerana ny nanafoanana ny #fanandevozana pic.twitter.com/8BNFuBJKBs
— Journaleuse en Katouri (@jielem__) 10 Jona 2020
Ao La Réunion, departemanta frantsay ampitan-dranomasina, ao amin'ny faritry ny Ranomasimbe Indiàna, misy ireo mponina mitaky ny hanoloana ny sarivongan'i “Mahé de La Bourdonnais”, governora fahiny tao amin'io nosy io izay nanangona harena tamin'ny famarotana andevo sy nampiasa azy ireny tamin'ireo fotodrafitrasa goavana.
Izaho manana ny tena fanontaniana : rahoviana no atsingidina io sarivongan'i Mahé de La Bourdonnais io ? Esory tany io diky (tay) io.
— zenfan larényon🇷🇪 (@Laroussoly) 10 Jona 2020
Eo anelanelan'ny fanesorana azy tsy ho amin'ny kianja ho an'ny daholobe, ary ny filàna mametraka ny tantara : misy fifandanjàna mila tadiavina
Raha misy ny manao antso hanongotana tsotra izao ireo tsangambato misy fifamatorana amin'ny resaka fanjanahantany sy fanandevozana, ny hafa indray mihevitra fa ny tokony hatao dia mametraka takelaka fanazavàna ny ara-tantara ahafahana mametraka ilay sarivongana manantantara ho ao anatin'ny vanimpotoanany.
Karfa Diallo, talen'ny fikambanana “Mémoires et partages”, dia efa hatry ny ela no mampahafantatra ny fametrahana ny tantaran'ireo anaran-dàlana sy sarivongana tsiahin'ny faha-fanjanahantany sy ny fanandevozana tao Frantsa. Hoy ny nambarany tao amin'ny France Inter :
[Takianay ny hoe] arodana ireo marika sasantsasany ary avela asiana fitaovana mitondra fanazavana kosa ireo làlana ambiny, izay ahafahana mitahiry ny tsiarontsika momba io heloka bevava natao tamin'ny zanak'olombelona io.
Ho an'ilay fikambanana dia tsy maintsy atsingidina i Faidherbe, fa miankina amin'ny fomba ametrahana azy anaty vanimpotoana ny zavatra rehetra :
Raha toa ka atao fotsiny hitantarana fa hoe nisy lafiny “tsara” ny fanjanahantany, […] tsy azo antoka mihitsy hoe izany no ho alaolana. Fa amin'ny lafiny iray tondroina mazava tsara, eny amin'ireny sarivongana ireny mihitsy aza, ny tena fototra fanjanahana, ohatra hoe ireo heloka maharikoriko izay tafiditra tsotra izao ao anatin'ny fotokeviny, araka izany dia mety ho azo iarovana ny alaolana tahaka izany.
Sarivongana : tantara sa fahatsiarovana ?
Manoloana ireny fitakiana ireny, ny hafa miaro ny fisian'ireny sarivongana eny anivon'ny habaka natao ho an'ny daholobe ireny no sady mitanisa fa tsy ilaina ny manivana ny tantara. Ho an'ilay mpahay tantara, Dimitri Casali, tsy vahaolana ny fanesorana ireny sarivongana ireny. Tamin'ny 2017, nanoratra izy tao anaty faritra fanehoankevitry ny Huffington Post :
Tsy misy Tantara averina soratana. Ny fanongotana ireo sarivongan'ireo olomalazantsika dia toy ny fanokafana ny vata mitahiry ny tsy ampoizina momba ny fanavaozana ny tantara. […] Ny Tantara, tsy maintsy atrehana. Na be voninahitra izany na feno henatra.
Kanefa, misy ny mametraka fanontaniana momba ny maha-ilaina ireny sarivongana ireny ho toy ny fanohanana ny tantara.
Ho an'i Françoise Vergès, mpandalina politika, mpahay tantara no sady feminista mpikatroka manohitra ny fanjanahana, rehefa nanao antsafa ho an'ny fantsona Youtube “Histoires Crépues”, ny fanesorana ireny sarivongana ireny dia resaka “rariny ara-pahatsiarovana” tsy misy ifandraisany velively “amin'ny famafàna ny tantara”. Mety ho vokatry ny “safidy pôlitika” fotsiny ihany ireo endrik'olona narantiranty tany amin'ireo tanandehibe frantsay.
Ny 14 Jona, raha niseho fahitalavitra ary niresaka tamin'ny vahoaka, toa nazava tsara ny toerana noraisin'ny filoha Emmanuel Macron manoloana ilay olana :
Tsy hamafa mihitsy na iray aza amin'ny dindo na anarana teo amin'ny tantarany ny Repoblika. Tsy misy hoadinoiny na kely aza ny asa nataony, tsy hanongotra sarivongana izy. Fa tokony isika hiaraka hibanjina amin'ny saina mahiratra ny tantarantsika manontolo, ireo fahatsiarovantsika rehetra.
Teny anjoron'io adihevitra io, izay tokony hitohy hahazo vàhana, mizara ny tenifototra #JeVeuxUneStatueDe ireo mpampiasa aterineto mba hametrahana ho eny anoloana ireo endrika fantadaza tamin'ny tantaran'ny mainty hoditra tian-dry zareo ho hita mipetraka eny amin'ireo habaka ho an'ny daholobe:
#JeVeuxUneStatueDe Anarcha (MilaMahitaSarivonganaAnarchaAho), ilay andevovavy noviravirain'ilay amerikàna, James Marion Sims, tsy nasiany fampatoriana (anesthésie) akory, ilay namorona ny “spéculum“. pic.twitter.com/1iKOhFgbUe
— Woke Witch (@stoner_fem) 15 Jona 2020
#JeVeuxUneStatueDe Suzanne Belair (MilaMahitaSarivonganaSuzanneBelairAho) nantsoina hoe Sanite Belair, ramatoa iray niady nanohitra ny famerenana ny fanandevozana tao Haïti. Nosamborina, notsaraina tribonaly mpanjanaka ary notapahan-doha. pic.twitter.com/VenBg2s5BX
— Black Lullaby (@MyWords_JustMe) 15 Jona 2020